Blog – Page3– New Dream Media Ministry Inc
ဘာသာပြန်သူ၏အမှာစာ စာဖတ်သူများအား … မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ခညောင်းတဲ့ ခရစ္စမတ်ပါ လို့ ဦးစွာနှုတ်ဆက်ပါရစေ။ ကျွန်တော်တို့မီဒီယာလုပ်ငန်းမှ ဒီစာအုပ်ကို ပရိသတ်လက်ထဲ အရောက်ပို့ပေးနိုင်ပြီဖြစ်လို့ ၀မ်းသာမဆုံးဖြစ်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘာသာပြန်တဲ့စာအုပ်တွေကို အားပေးတဲ့ စာဖတ်သူတွေ၊ ခရစ်ယာန်စာပေကို မြတ်နိုးတဲ့ စာချစ်သူတွေကို စာရေးသူ ကျွန်တော့်အနေနှင့် ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်တာမရှိပါ။ သို့သော် . . . စာကောင်းပေမွန်များကို ဘာသာပြန်ခြင်းဟာ ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်နိုင် သည့် စာပေအမှုတော် ထမ်းရွက်ခြင်းဟု ခံယူတဲ့အတွက် တတ်နိုင် သလောက် ကြိုးစား၍ ဘာသာပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ယခု ပရိသတ်လက်ထဲရောက်ရှိလာတဲ့ စာအုပ်ဟာလည်း ကမ္ဘာကျော်ခရစ်ယာန်သင်းအုပ်ဆရာ၊ စာရေးဆရာ ျွငခု ျွှမေမနည ရဲ့နောက်ဆုံးထုတေ်၀တဲ့စာအုပ်ပါ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ခရစ္စမတ်ရာသီအတွက် ထုတေ်၀တဲ့စာအုပ်လေးပါ။ ဒီတော့ကျွန်တော့်အနေနှင့် ဒီလို စာအုပ်ကောင်းကို ပရိသတ်လက်ထဲအရောက်ပို့ခွင့်ရခြင်းကြောင့် ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ တကယ်တော့…
အခန်း(၁) လက်ထပ်ခြင်း (သို့) အနက်ရှိုင်းဆုံးပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု။ သူမ…။ သူမကို စတင်တွေ့ခဲ့တဲ့နေ့ကို “ဂျက်’မေ့နိုင်တော့မည်မဟုတ်။ “ဂျက်”သည် တက္ကသိုလ်ဘော်လုံးပွဲအပြီးမှာ သူမကိုတွေ့ခဲ့သည်။ သူမကိုမြင်မြင်ချင်း ရင်ခုန်နေသလိုခံစားရသည်။ သူမကိုကြည့်ရ သည်မှာ “ဂျက်” မြင်ခဲဖူးသမျှ အမျိုးသမီးများထက် ပို၍လှပ ချောမောနေသည်။ သူမရဲ့ နာမည်က “အိုင်’ဖြစ်သည်။ “ဂျက်အနေဖြင့် သူမနှင့်စကား ပြောချင်စိတ်ရှိသော်လည်း သူ၏ အားကစား ဝတ်စုံကို မချွတ်သေး၍ ညစ်ပတ်နေသောကြောင့် အနားသို့မကပ်ရဲခဲ့။ သို့သော်လည်း ထိုနေ့၊ ထိုအချိန်မှစ၍ သူမနှင့်ထာဝစဉ်လက်တွဲ ပြီး နီးကပ်နေချင်သည့်ဆန္ဒတစ်ခုသည် “ဂျက်”၏နှလုံးသားတွင် သန္ဓေတည်လာ၏။ အချိန်ကာလတို့ ရွေ့လျားသည်နှင့်အတူ ‘အိုင်”နှင့်“ဂျက်”တို့ချစ် သူများဖြစ်သွားကြသည်။ ထိုစဉ်က’ဂျက်’ အနေဖြင့် “အိုင်ပီ’ ၏အချစ်ကို သံသ ယများရှိနေသေးသည်။ သို့သော် “ဂျက်”သံသယဝင်သကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ “အင်” အနေနှင့် သူ့ကိုအလွန်ချစ်ကြောင်း…
ရန္ကုန္ဒီဇင္ဘာ ၃ အိပ္မက္ဆံုရာ Season-6 အဆိုေက်ာ္ Lဂ်ာဆိုင္ပန္၏ “လြမ္းလို႔” တကိုယ္ေတာ္ေတးအယ္ဘမ္ မိတ္ဆက္ပြဲကုိ ယခုလ ၂ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Orchid Hotel၌ ျပဳလုပ္သည္။ ကခ်င္တိုင္းရင္းသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Lဂ်ာဆိုင္းပန္၏ အဆိုပါေတးစီးရီးမိတ္ဆက္ပြဲတြင္ အိပ္မက္ဆံုရာ ဝိုင္းေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ေတးေရး ေစာခူဆဲ၊ Vocal Trainerခုိင္ျမဲသာလည္း တက္ေရာက္အားျဖည့္ေၾကာင္း သိရသည္။ KIM
မႏၲေလး ဒီဇင္ဘာ၃ HICက ၾကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ One Day Seminarအား ယခုလ ၄ရက္ေန႔(လြတ္လပ္ေရးေန႔)တြင္ အမွတ္ ၄၄၊ ျပည္လမ္း၊ ဒဂံုျမိဳ႕၊ Bishop’s Home (၃)လႊာ၊ ေတာ္ဝင္စင္တာအေရွ႕၊ စိန္ေဂဟာေနာက္ေက်ာ၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သင္တန္းအား Singapore HIC အသင္းေတာ္၏ Senior Pastor Rev Kairos Kimက သင္တန္းေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး မနက္စာ၊ ေန႔လယ္စာႏွင့္ ညစာပါ တပါတည္း ျပင္ဆင္ထားမည္ဟု သိရသည္။ မနက္၁၀မွ ညေန၄နာရီအထိျပဳလုပ္မည့္ အဆိုပါသင္တန္းအား စိတ္ပါဝင္စားေသာ ခရစ္ယာန္ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား အတူတကြဝိညာဥ္ခြန္အားယူႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း HICက ဆိုထားပါသည္။ KIM
Saya Mung Pi (CITY) – MWC Tulsa
This is the day that the Lord has made to see with you. We bring you to hear the new words from our dreams. That’s not the old words but fresh and new. Every one hasachance to dream. Every one needs to dreamafresh new dream. So that our dreams come true.…